Salaamanews » 2012 » December » 06
Home » Daawo wariyeyaal Soomaali ah oo si toos ah ama muuqaal ah dood ugu wadaagaya barnaamijka cusub ee Google Plus
(Salaamanews)-Daawo wariyeyaal si toos ah dood ugu wadaagayey barnaamij si toos ah la isku arki karo, oo laguu talo galay in bulshooyinka caalamku si muuqaal ah u wada xariiraan. Barnaamijkaan oo lagu magacaabo Google Plus, waxaa dhawaan adeegyadeeda ku soo dartay shirkadda Internet-ka ee Google.
Hadaba wariyeyaashan oo dhammaantood kala jooga wadamo kal duwan ayaa barnaamijka oo ay ahayd markii... Tags: warar Xukuumadda oo mamnuucday iibinta agabka ciidamada xooga dalka
(Salaamanews)-Golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya oo maanta shirkoodii caadiga ahaa ee Khamiista ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa mamnuucay ka ganacsiga agabka ciidamada sida dharka iyo hubka.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra’isal wasaaraha Soomaaliya Cabduqaadir Faarax Shirdoon ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay mamnuucday ka ganacsiga hubka, rasaasta, dharka ciidanka gaar ahaan... Tags: ganacsiga, warar Siyaasi laga mamnuucay Puntland oo gaaray Boosaaso
(Salaamanews)-Waxaa Khamiista maanta ah magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaaray Siyaasiga Jeneraal Cabdullahi Siciid Samatar iyo Maxamed Cumar Dhigac oo horey looga digay inay tagaan deegaannada Puntland.
Garoonka Bandarqaasim ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa labadaasi masuul ku soo dhaweeyay dadyoow aad u badan oo watay calamo ay ku qoranyihiin ammaan iyo bogaadinl.
Siyaasiga Jeneraal... Tags: warar Puntland oo ciidamo dheeraad ah geyneyso buuraha Galgala
(Salaamanews)-Puntland ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay heegan buuxa ku jiraan iyadoo sheegtay in ciidamo dheeraad ah ay geyneyso buura lleyda Galgala oo dagaal xoogan uu ku dhexmarayo fallaago taabacsan Al-shabaab iyo ciidamada amniga Puntland.
Wasiirka Amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan, ayaa sheegay in Puntland ay heegan galisay ciidankeeda iyadoo ka digtoon weerarro argagaxiso oo kaga yimaaddo... Tags: warar Khasaaraha qarax ka dhacay Muqdisho oo soo kordhayo
Dad goob joogayaal ah ayaa noo xaqiijiyay in qaraxa lala beegsaday ciidamo... Tags: warar Kenya bomb blast wounds 10 people in Nairobi
Kenyan authorities... Tags: news Kenya oo Al Shabaab ku eedeysay qarax ka dhacay Nairobi
Dad ku dhaqan Nairobi ayaa SN u sheegay in ku... Tags: warar Fannaanka Axmed Heybe oo lagu aasayo Muqdisho
Nimco Axmed Heybe oo iyana ah majaajiliiste caan ah uu dhalay allah ha u naxariistee... Tags: suugaan, warar Daawo Muuqaal ku saabsan kulankii uu madaxweynaha Soomaaliya la yeeshay dhiggiisa Turkiga iyo waliba heshiiskii ay labada dal kala saxiixdeen
Kulankii ugu horreeyey ayuu madaxweymaha Soomaaliya mudane Xassan Sheekh, waxaa uu la... Tags: warar Oday dhaqameed ka qeyb qaatay ansixintii Dastuurka oo lagu dilay Muqdisho
(Salaamanews)Sida dad goob joogayaal ah ay xaqiijiyeen dabley hubeysan oo aan la heyb garan ayaa habeenkii xalay degmada Wadajir ku dilay mid ka mid ah ergadii ka qeyb gashay shirkii Ansixinta dastuurka ee bishii August ka dhacay magaalada Muqdisho.
Goob jooge ku sugan degmadaasi Wadajir ayaa sheegay in dilka ay fuliyeen dhallinyaro Bastoolado ku hubeysnaa oo durba goobta ka baxsaday markuu falka... Tags: warar Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »